Ubomi kunye nobomi bentsapho yowesifazane
IziNmphomaniacs zibizwa ngokuba "ngabafazi abangenangqondo." Nobudlova babo - "izilwanyana zesisu." Bathi wonke umntu wesithathu amaphupha okudibana nomfazi onjalo endleleni. Okokuqala, isondo kunye naye isondo ngaphandle kwemithwalo. Okwesibini, akanamdla kwiimpawu zakhe zokuziphatha, ukubonakala kwakhe, okanye isimo sakhe sezenhlalakahle, kodwa ubukhulu besithunzi sakhe sabantu. Okwesithathu, kunye naye unako ukuqonda izinto ezifihlakeleyo ezifihlakeleyo. Akumangalisi ukuba kukho imbali yokuba yayiyi-nymphs ezafundisa abantu zonke iintlobo zeentlobano zesini, kunye nesondo somlomo kunye nesilwane. Ubomi bentsapho kunye neentsapho ze-nymphomaniac yintetho yesifundo sethu.
Ukukhangela injabulo ngokupheleleyo
Imbali ingummiselo, kodwa, inyaniso, ubomi bunzima kakhulu. Indoda, elele embhedeni kunye ne-nymphomaniac, iya kuphelelwa amandla. Ngexesha elifanayo, ukwaneliseka kwakhe akukhathaleli. I-Nymphomaniac ijolise ngokwayo. Udinga ngokuphindaphindiweyo kwaye kuninzi, kodwa kumgca wokugqibela awukwazi ukuqhuba. I-Orgasm yakhe yinto engenakufumaneka. Kufana ne-oasis entlango, apho nonke niya khona niya khona, kwaye ke kuvela ukuba akunjalo. Yaye uqhubeka uhambo lwakho entlango, ungenasiphelo kwaye unenjongo.
Umhlobo wam wayenomhlobo, intombazana engama-20 ubudala. Waziqhayisa ngokuthi waphuma waya kwisitrato, "wafaka u-muzhiks" waza wabakhupha ekhaya. Kuyinto enomdla ukuba imvakalelo yale ntombazana encinci ihlale ihle kakhulu: i-euphoria, ilizwe eligqibeleleyo. "Ndingumlumko, mhle, ngunomtsalane!" - wathi ... Ezi zigulane zivame ukuziswa kudokotela ngezihlobo. Bona ngokwabo abayiqondi into engalunganga ngayo.
Isishuko sezesondo esifana ne-nymphomania (ngamadoda-satyriasis) esinokuvela ngenxa yokukhathazeka kwe-hormone kwiimpawu zokuqala zesifo sengqondo (ingqondo), kodwa ngokuphindaphindiweyo kungeyona enye yeembonakalo zengqondo yokudandatheka kwengqondo, "kusho u-sexologist uGeorge Selyukov, apho iimeko zengqondo ziguqukayo. Ezi zigulane ziphelelwa ngumonde, zingenele, zingenasiphi na isinyathelo saloo nto zidibeneyo, ziyakuthanda ukuthetha ngezocwangciso zabo zesini.
Ubomi bentsapho kunye nosapho , abantombazana abanesifo se-nymphomaniac badla kakhulu, bazive behlala benamandla kunye nesifiso soxhatshazo ngokwesini, apho bafuna ukuwanelisa khona nawuphi nabani na. Abakwazi ukuzilawula kunye nenyaniso ejikelezileyo.
I-Nymphomaniacs icinga ukuba bayonwabile. Ulonwabo kubo luyimpumelelo engapheliyo, befuna ukuzonwabisa okungenakufumana, abafuna ukufumana ukwaneliseka okhethekileyo.
Abantu abaneenkathazo ezinzulu ze-hysterical, njengomthetho, bancinane. Banoyiki lwangaphakathi lokuxhamla ngokomzwelo, abafuni ukuthatha uxanduva lomntu omnye. Ubundlobongela buchitha yonke into. Ndisoloko ndibaxolisa - Ndiyazi ukuba baya kuziva njani xa baphiliswa kwaye banokuvavanya ngezenzo zabo. Ngendlela, emva kokuphulukana, umfazi unokuphinda akwazi ukufumana u-orgasm, ufumane ukwaneliseka ngokwesini, ekutya, ebomini ngokubanzi.
Ingxaki enesimo seetyhula ye-pathological mood (i-manic-depression) yimbi kakhulu kwaye iyingozi kakhulu, ngoko iphathwa unyango, kwaye, ngokusemthethweni, esibhedlele. Kukwinqanaba le-mania ukuba izigulana zibonisa ukuxhatshazwa koxhatshazo.
Yintoni inokuthi incedise i-therapist ngexesha lokubuyiselwa? Okokuqala, ukucacisa: akunakwenzeka ukuba umntu atyholwe ngokugula (ngendlela, ukuphazamiseka kwamanxeba okuphazamiseka ngokomzimba). Ingaba unetyala, umzekelo, ukuba ubambe umkhuhlane, ukukhwehlela kunye nokukrazula? Kule meko, imfuno yesondo ingafaniswa nokukhwehlela okungalawulwayo okungalawulwayo.
Ngamanye amaxesha ama-Nymphomaniac abizwa ngokuba yilokho ekhokelela ngobomi bokuziphatha ngokwesondo kwaye ayinaki yonke imilinganiselo yokuziphatha kunye nemiqathango. Enyanisweni, aba bafazi baphilile kakuhle - bayazi izenzo zabo, ezihlala zikhuthazwa. Ngokomzekelo, ibhinqa ifuna ukwenza umsebenzi - kwaye iphule "ngameva kwiinkwenkwezi" ngenxa yombhedi. Kwi-press nakwi-intanethi, unokufunda ezininzi iimpawu zeenkwenkwezi, apho zidla khona iinkcukacha, zichaze ngesondo kunye nabavelisi.
Okanye, yithi, ibhinqa lidlwenguliwe okanye lixhatshazwa ngokwesondo. Uxinzelelo olunjalo lunokubangela ukuba i-vaginismus (isithintelo esibuhlungu esisiswini se-vagina kunye ne-perineum eyenzekayo xa uzama ukufaka ipeni) okanye, ngokuchasene noko, ukuphendula ngendlela enjengokuthi "Ndiza kuzibonakalisa ukuba ndingento yanto kubo bonke abantu!" Loo mntu unabathandi abaninzi abakhangela ngokukhawuleza.
Kubalulekile ukuhlukanisa phakathi kwe-nymphomania kunye nomgaqo-siseko wesondo oqinileyo umntu anikwe wona ngokuzalwa. Elinye ibhinqa lanele ukulala ngesondo omnye ngonyaka, ngelixa kwabanye, iindida ezininzi ezifunekayo ngosuku. Abasetyhini abanomgaqo-siseko wesondo oqinileyo banokufumana i-orgasm ukususela kwiminyaka emithathu, behlala esityhini. Kwaye oku akuthethi ukuba bayagula. Bafumana inqanaba eliphezulu le libido.
Ngokwemvelo, amandla esondo, ukuphakama kwamabhinqa kudla ngokufikelela kwiminyaka engamashumi amathathu, kufuneka ilahlwe kwindawo ethile.
Utshintsho oluqhubekayo lwamaqabane ngamanye amaxesha lubonisa umnqweno wokuzibandakanya nokwandisa ukuzithemba. Umfazi ubonakala ngathi ngaloo ndlela ufumana ukuzithemba. Kodwa oku kuyingcamango. Njengokuba kufaka indawo yekhofi: iyakuthanda njengekhofi, kodwa ngaphandle kwe-caffeine. Ukuzithemba kuphuculwe kuqala kunye nokubaluleka ngokumalunga ngokupheleleyo kunye nomntu onothando.
Xa loo ntokazi ifika kum, okokuqala, ndiyabuza into ayiva ngayo ngoku. Njengomthetho, ihlazo, umnqweno wokutshintsha, kunye neyona nto ibalulekileyo - ityala. Kodwa ngubani ngokuthe ngqo? Apha, umfazi mhlawumbi uya kuthetha ngewayini kubazali bakhe, ndiyakuqinisekisa oku, kusekelwe kumava am nje njengengqondo ye-psychotherapist. Kwaye ke kufuneka uzicwilise ebuntwaneni bakhe, udibanise kwiinkomfa zentsha. Ulwalamano olunjani lwabazali bakhe? Impendulo yalo mbuzo iza kunceda ukufumanisa: kutheni ufuna abazithandayo abangama-20, nangona ngokubanzi umntu onothando omnye unelisekile? Kwaye umfazi kufuneka azibonele aze azithande yena. Ngokubanzi, isiseko sayo sibekwe ebuntwaneni kwindlu yabazali.
Kuze kube yiminyaka emine intombazana ihlala kwintsimi yomama wengqondo, yemvelo, yokomoya. Ukususela kwi-4 ukuya kweyesibhozo - kwintsimi yabazali bobabini. Emva kwesibhozo, utata ubaluleke kakhulu. Umama ngeli xesha wenza indima yomcebisi, intombazana iya kumxelisa, ikopi. Yaye uyise uyinika impendulo ngengxelo: ingaba uyayithanda kangakanani. Ukuba uyise uyamgxeka: "Wenze njani? Unjani uhlobo lweengubo ozigqobileyo? ", Kwaye unina unxinxela naluphi na ukubonakaliswa kwesondo:" Hlala ekhaya, kungekhona ukuba ndakhulisa ukuze uchithe ixesha elithile kwi-Vasya! "Okanye" Ungowesiketi se-mini, ! "le ntombazana inento ephantsi yokuzithemba. Omnye wabahlobo bam, onomntu ongaqhelekanga ngokungaqhelekanga, ngandlela-thile wavuma: "Ndandichitha konke ukucinga kwam abantwana ukuba ndiyingozi, ndibe neentloni ukuphuma. Kwaye ngoku ... Uyazi, andiyikhumbuli igama lam indoda yesibini. Oo, bangaphi babo babekho! "
Ubuntu bendawo yokugcinwa kwezinto ezinobungozi bayizinto ezimbi nabaphuphayo. Ukungakhuselekanga kunye neengqondo zengqondo azivumeli ukuba baxhathise.
Xa loo ntokazi ifika kum, okokuqala, ndiyabuza into ayiva ngayo ngoku. Njengomthetho, ihlazo, umnqweno wokutshintsha, kunye neyona nto ibalulekileyo - ityala. Kodwa ngubani ngokuthe ngqo? Apha, umfazi mhlawumbi uya kuthetha ngewayini kubazali bakhe, ndiyakuqinisekisa oku, kusekelwe kumava am nje njengengqondo ye-psychotherapist. Kwaye ke kufuneka uzicwilise ebuntwaneni bakhe, udibanise kwiinkomfa zentsha. Ulwalamano olunjani lwabazali bakhe? Impendulo yalo mbuzo iza kunceda ukufumanisa: kutheni ufuna abazithandayo abangama-20, nangona ngokubanzi umntu onothando omnye unelisekile? Kwaye umfazi kufuneka azibonele aze azithande yena. Xa ulawula ukuzithandayo, unokwazi ukuthanda omnye.
Indlela yokukhusela kakuhle indawo yakho yokujonga
Indlela abafazi bahobisa ngayo ubomi babantu
Ziziphi iintombi ezifana namadoda okwenene
Iingxaki zengqondo zengxabano kwiintsapho eziselula
Indlela yokurhoxisa ubunzima bokuzithemba
Umntwana uya kwibanga lokuqala, indlela yokukhetha isikolo
Iholide yothando ngoFebhuwari 14: yintoni omele uyinike intanda yakho kunye nendlela yokuyihalalisela ngokunyanzela kwindinyana kunye neprose
I-Cosmetics yowesifazane oneminyaka engama-30 ubudala
Inyaniso kunye neengcamango ngohlobo lwesisu
Ukukhulelwa, inkqubo yokukhulelwa, ukubeletha
Unyango lwengcinezelo yomshushu
Iibhola zebhokisi ezineepistachios neidiliya